Kohalpur Times » बुबालाई मैले नै पालेको छु (लघुकथा) बुबालाई मैले नै पालेको छु (लघुकथा) – Kohalpur Times
बुबालाई मैले नै पालेको छु (लघुकथा)
२१ मंसिर २०७८, मंगलवार ०८:५५
बाहिर आँगनमा बसेकाे थिएँ । दुई भाइ छाेराका घर जाेडिएका थिए । कान्छाे अफिसबाट आयाे । सँगसँगै साथीहरू आएका रहेछन् । “मेरो बुबा” भनेर चिनायो । उनीहरूले “नमस्कार बुबा” भनें । नमस्कार फर्काएँ । नमस्कार फर्काउँदा पनि हात थरथरी काँप्छन् । माथि उठ्नै सक्दैनन् । सकीनसकी उठाएँ । कतिलाई त मुखले मात्रै नमस्कार गर्छु ।
उनीहरू पेटीमा बसेर गफ गर्न थाले । “बुबा हजुरसँगै बस्नुहुन्छ ?” दाजुकाे घर सँगै छ भन्ने थाहा पाएपछि उनीहरूले साेधे । कान्छोले हतारिदै भन्यो “हो मसँग।”
ए ए घर सँगसँगै भए पछि बुबालाई पनि दिन कटाउन सजिलो हुन्छ नि ।
के सजिलो हुनु र ? उ पटक्कै हेर्दैन । कहिलेकाही लुगाफाटो, पकेट खर्च बाहेक केही दिन्न उसले ।
ए ए भन्दैउनिहरु मेरो मुखतिर हेरे ।
कान्छोले फेरि दाेहार्यायाे “मैले नै पालेको छु । दाइले राख्न मानेन । फुर्सद हुँदैन रे भाउजुलाई । एउटाले त राख्नै पर्याे नि । आफ्नै बुबा हुन् । तर्केर पनि भएन ।” यो भन्दा बढी मैले सुन्न सकिन । हात मुखभित्र पुर्याएर वाक्क गरें । कान्छो दाैडिदै आयो ।
“के भयो बा ? “
“केही भएको छैन । थुकले गला लाग्यो ।”
” ए ए ठिकै छ नि त ।”
ऊ नजिक आयो र फर्कियो । मेराे मन भने अघिकै ठाउँमा टक्क उभियाे ।
“मेरो जिन्दगीभरिकाे कमाइमा म पालिने थिइन र ?” आफैंलाई प्रश्न गरें । जताततै आफ्नै कमाइ देखिरहेको थिएँ । सन्तान जन्माएँ । हुर्काएँ । पढाएँ । जागिरका लागि योग्य बनाएँ । मेरो कमाइबाट खुट्टा टेकेकाे छाेराले “मलाई पालेकाे घुर्की लगायो ।” यो बुढेसकालकाे जिन्दगी बोझ लाग्यो । फेरि सोचेँ –
मेरो जमिन बेचेर मेरै घडेरीमा घर बनायो । उसको कमाइले उसकै पकेट खर्च पुग्दैन । भात मेरो खेतकाे खान्छ। सबै सम्पत्ति मेरै प्रयोग गर्छ तरपनि मैले बा पालेको छु भनेर पटकपटक घुर्की लगाउँछ । भाते छाेराे । झाेक चल्याे
। उठें “भाेलि मुद्दतीमा राखेको मेरो पचास लाखकाे ब्याज बुझ्ने दिन हो ? जान्छस् त कान्छा ?
कोहलपुर जेसिसको पदस्थापना सम्पन्न
अन्जु न्यौपानेको ‘लुकेको वासना’ विमोचन
बुद्ध एयरको विमान निर्धारित समयमा ल्याण्ड हुन नसक्दा एक यात्रु वेहोस
बाँके कोरोनाको हटस्पट बन्दै, आजमात्रै १३० जनामा देखियो संक्रमण
बाँके युनेस्कोद्वारा चारपालिकाका अभियन्तालाई क्षमता विकास तालिम